စိတ်နှလုံးမှ ပြောသော စကားများ (အပိုင်း-၉) | ESD | Burmese
စိတ်နှလုံးမှ ပြောသော စကားများ (အပိုင်း-၉)
February 25, 2020 prashant mann ki baat
ချစ်လှစွာသော နိုင်ငံသားအပေါင်းတို့….. ကျနော့်အနေနှင့် နိုင်ငံတဝှမ်းမှာရှိတဲ့ Kutch ဒေသကနေ Kohima မြို့အထိ၊ Kashmir ဒေသကနေ Kanyakumari မြို့တို့အထိ အနယ်နယ်အရပ်အရပ်တို့မှ နိုင်ငံသားတွေနှင့် ထပ်မံတွေ့ဆုံရဖို့ အခွင့်အရေးတရပ်ရရှိခဲ့တာ အင်မတန် ကံကောင်းလှပါတယ်။ အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံဟာ အိန္ဒိယနိုင်ငံသား တယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့ ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားမှုတွေနှင့်အတူ ယဉ်ကျေးမှုထုံးတမ်းအစဉ်အလာ အရောင်အသွေး စုံလင်လှပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်အနည်းငယ်အကြာက ဒေလီမြို့ရဲ့ Hunar Haat ဆိုတဲ့နေရာမှာ မိမိတို့နိုင်ငံရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု အစဉ်အလာ အသီးသီးတို့နှင့် ရိုးရာအစားအစာတွေအပြင် နွေးထွေးပျူငှာတဲ့ စိတ်ခံစားချက်တွေကို မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ရှေးရိုးအစဉ်အလာအတိုင်း ပန်ဂျပ်ပြည်နယ်ထွက် အဝတ်အထည်တွေ၊ လက်မှုပညာတွေ၊ ဝါးနှင့်လုပ်ထားတဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေ၊ Andhra Pradesh ပြည်နယ်ရဲ့ ဆန်းပြားလှတဲ့ သားရေပစ္စည်းတွေ၊ Tamil Nadu ပြည်နယ်မှ လှပလှတဲ့ ပန်းချီကားတွေ၊ Uttar Pradesh ပြည်နယ်ထွက် ကြေးထည်ပစ္စည်းတွေနှင့် တီးမှုတ်တူရိယာပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု အနုပညာတွေဟာ တကယ့်ကို ဆန်းကျယ်ထူးခြားလှပါတယ်။ အနုပညာရှင်တွေရဲ့ ဖြစ်ရပ်ဇာတ်ကြောင်း အသီးသီးတို့ကိုလည်း သိရှိခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီ Hunar Haat ကနေတဆင့် အနုပညာရှင်နှင့် လက်မှုပညာရှင် ၃ သိန်းနီးပါးတို့ဟာ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွေ အများအပြား ရရှိခဲ့ကြပြီး အဲဒီအနက် ၅၀% ကျော်တို့ဟာ အမျိုးသမီးတွေဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲဒီ Hunar Haat ရပ်ကွက်လေးဟာ လက်မှုနှင့် အနုပညာ ခင်းကျင်းပြသမှုတခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုအနုပညာ မှန်ကူကွက် တစိတ်တပိုင်းသာမက အလုပ်ကြိုးစားကြတဲ့ လက်မှုပညာရှင်တွေရဲ့ ဘဝတိုးတက်ရေးကိုလည်း အထောက်အကူပြုတာကြောင့် အဲဒီနေရာလေးကိုလည်း သွားကြည့်စေလိုပါတယ်။
ချစ်လှစွာသော နိုင်ငံသား အပေါင်းတို့…. ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံဟာ ထုံးထမ်းအစဉ်အလာ ရိုးရာတွေ ပြည့်စုံလှတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ မိမိတို့ ဘိုးဘေးတွေဆီကနေ လက်ဆင့်ကမ်း ရရှိခဲ့ကြတဲ့ အမွေအနှစ်၊ အသိပညာ ဗဟုသုတနှင့် ယဉ်ကျေးမှုတန်ဖိုးတွေဟာ သက်ရှိသတ္တဝါအားလုံးအတွက် ရိုင်းပင်းကူညီမှုတွေနှင့် သဘာဝတရားအတွက် မေတ္တာဓာတ်တွေ စိမ့်ဝင်စေလျှက်ရှိပါတယ်။ ဒါတွေအားလုံးတို့ ကျွန်ုပ်တို့ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ရဲ့ တစိတ်တဒေသ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ ဓလေ့ထုံးစံတွေမှာ ဒီလိုနွေးထွေးမှုရှိတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတွေကို တွေ့ကြုံပြီး ပါဝင်ဆင်နွှဲကြဖို့အတွက် ကမ္ဘာတဝှမ်းမှ ငှက်မျိုးစိတ် အများအပြားတို့ဟာ အိန္ဒိယနိုင်ငံကို ပြောင်းရွှေ့ပျံသန်း နေထိုင်လာကြလေ့ရှိပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ဒေသအသီးသီးတို့မှ ငှက်မျိုးစိတ်ပေါင်း ၅၀၀ ကျော်တို့ ပျံသန်းနေထိုင်ရာ ဒေသဖြစ်ပါတယ်။ တလောကတင်ပဲ Gandhinagar မြို့မှာ COP-13 ညီလာခံကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီကိစ္စနှင့်ပတ်သက်လို့ အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုလည်း ချီးကျူးဖော်ပြထားကြပါတယ်။ အိန္ဒိယဟာ ဒီလို ရွှေ့ပြောင်း နေထိုင်တဲ့ သတ္တဝါ မျိုးစိတ်တွေနှင့်ပတ်သက်ပြီး COP ညီလာခံကို လာမယ့် ၃ နှစ်ကာလအထိ နာယကပြုသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
COP ညီလာခံကြောင်း ဆွေးနွေးမှုနှင့်အတူ Meghalaya ပြည်နယ်နှင့် ပတ်သက်တဲ့ အရေးကြီး သတင်းတရပ်က ကျနော့်အာရုံကို ဆွဲဆောင်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ မကြာသေးခင်ကတင်ပဲ ဇီဝဗေဒ ပညာရှင်တွေဟာ Meghalaya ပြည်နယ်ရဲ့ လှိုဏ်ဂူတွေအတွင်းမှာ ရှင်သန်နေထိုင်တဲ့ ငါးမျိုးစိတ် အသစ် ၁ မျိုးကို ရှာဖွေ တွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီငါးမျိုးဟာ လှိုဏ်ဂူတွေအောက်မှာတွေ့ရှိရတဲ့ ရေနေသတ္တဝါတွေအနက် အကြီးမားဆုံးဖြစ်တယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ အလင်းရောင် ရောက်ရှိမှု နည်းပါးလွန်းလှပြီး အလွန်နက်ရှိုင်းမှောင်မည်းနေတဲ့ မြေအောက်လှိုဏ်ဂူတွေထဲမှာ နေထိုင်ကျက်စားနေကြပါတယ်။ ဒီလောက်နက်တဲ့ လှိုဏ်ဂူတွေထဲမှာ ဒီလိုငါးကြီးတွေ ရှင်သန်နိုင်စွမ်းရှိနေတာကို သိပ္ပံပညာရှင်တွေလည်း ခေါင်းစားလျှက်ရှိပါတယ်။ မိမိတို့အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာ အဲဒီလို မဖော်ထုတ် မတွေ့ရှိရသေးတဲ့ အံ့ဖွယ်တွေအများအပြားနှင့် ပြည့်နက်နေတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။
Tamil စာရေးဆရာမကြီး Avvaiyar ကတော့ ကျွန်ုပ်တို့သိရှိထားတာဟာ သဲ တဆုပ်စာခန့်သာရှိပြီး၊ မိမိတို့ မသိသေးတာတွေက စကြာဝဠာလောက် ကြီးမားနေတယ်လို့ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ များများ သိလာလေလေ ကိုယ်မသိသေးတဲ့ပမာဏကို ပိုသဘောပေါက်လာလေလို့ ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံရဲ့ အပင်နှင့် သတ္တဝါ အရောင်အသွေးစုံလင်စွာ အတူတကွ ယှဉ်တွဲနေထိုင်မှုဟာ လူသားမျိုးနွယ်တခုလုံးအတွက် အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ တန်ဖိုးဖြစ်ပြီး ဒါတွေကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ချစ်လှစွာသော မိတ်ဆွေလူငယ်လူရွယ် အပေါင်းတို့… အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ ကလေးလူငယ်တွေဟာ သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာကဏ္ဍမှာ စိတ်ပါဝင်စားမှု တိုးများလာလျှက် ရှိနေကြပါတယ်။ အာကာသအတွင်း ဂြိုဟ်တု လွှတ်တင်မှု စံချိန်တွေ၊ စံချိန်သစ်တွေနှင့် လကမ္ဘာခရီးတွေဟာ အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတိုင်းရဲ့ နှလုံးသားကို ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွးမှုတွေ ပြည့်နက်စေလျှက်ရှိပါတယ်။ Bengaluru မြို့မှာ အမှတ် ၂ Chandrayan လကမ္ဘာခရီး ဆင်းသက်စဉ်က အဲဒီမှာ ကြည့်ရှုနေကြတဲ့ ကျောင်းသားလေးတွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုနှင့် ဝါသနာကြီးမှုတို့ကို တွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ သူတို့လေးတွေဟာ တညလုံး မအိပ်ဘဲ နေခဲ့ကြပါတယ်။ သိပ္ပံ၊ နည်းပညာနှင့် တီထွင်မွမ်းမံကြံဆမှုတွေလုပ်ရမယ်ဆိုရင် ကလေးတွေရဲ့ လေ့လာစူးစမ်းလိုစိတ်တွေကို ဘယ်သူကမျှ ဘေးဖယ်ထားလို့ မရနိုင်ပါဘူး။ ကလေးတွေနှင့် လူငယ်တွေမှာ အဲဒီလို ဝါသနာပါစိတ်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့အတွက် နောက်ထပ်စနစ်တခုကို ထားရှိလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ယခုတော့ Sriharikota ဒေသမှာ ဒုံးကျည် လွှတ်တင်တာတွေကို သင်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်မျက်စိနဲ့ တပ်အပ် စောင့်ကြည့်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအဆောက်အဦးကို မကြာသေးမီကတင်ပဲ အားလုံးအတွက် ဖွင့်လှစ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ လူ ၁ သောင်းလောက် ထိုင်ကြည့်နိုင်တဲ့ ပြတိုက်ဆောင်တခု ဆောက်လုပ်လိုက်ပြီဖြစ်ပြီး ISRO ဝဘ်ဆိုဒ် စာမျက်နှာမှာပေးထားတဲ့ လင့်ခ်ကတဆင့် အွန်လိုင်းကနေ လက်မှတ်ဖြတ်လို့လည်း ရနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ စာသင်ကျောင်း အများအပြားတို့ဟာ ၎င်းတို့ရဲ့ ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကို ဒုံးကျည်လွှတ်တင်မှု တိုက်ရိုက်ကြည့်ရဖို့အတွက် ခရီးတွေ စီစဉ်နေကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ယခုအချိန်မှာ ဒီအခွင့်အရေးကို စာသင်ကျောင်း အားလုံးတို့မှ ကျောင်းအုပ်တွေနှင့် ဆရာ/ဆရာမတွေ လာရောက်ရယူကြပါလို့ ကျွန်ုပ် တိုက်တွန်းတောင်းဆိုအပ်ပါတယ်။
ချစ်လှစွာသော နိုင်ငံသားအပေါင်းတို့…. တောတောင်ချိုင့်ဝှမ်းတွေနှင့် လှပတဲ့ Ladakh ဒေသဟာ Leh မြို့ရဲ့ Kushok Bakula (ကုသိ ဘာကူလာ) Rimpoche လေဆိပ်ကနေ အိန္ဒိယ လေတပ်မတော်ရဲ့ AN-32 လေယာဉ် ထွက်ခွာပျံသန်းမှုနှင့်အတူ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက်နေ့မှာ သမိုင်းမှတ်တိုင် စိုက်ထူနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီပျံသန်းမှုမှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံထုတ် ဂျက်လေယာဉ်သုံး ဇီဝ လောင်စာဆီ ၁၀% ရောနှောထားတဲ့ လောင်စာကိုအသုံးပြုခဲ့ပြီး ဒါဟာ စက် ၂ လုံးစလုံးမှာ အဲဒီလို ဇီဝ လောင်စာဆီကို ပထမဆုံးအကြိမ် အသုံးပြုမှု ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါတင်မကသေးပါဘူး၊ Leh မြို့ကနေ လေယာဉ် ထွက်ခွာပျံသန်းသွားတဲ့ လေယာဉ်ကွင်းဟာ အိန္ဒိယနိုင်ငံအတွင်းသာမက ကမ္ဘာပေါ်မှာပါ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် အထက် အမြင့်ဆုံး တခုတည်းသော လေဆိပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ ဇီဝလောင်စာဆီကို စားလို့မရနိုင်တဲ့ သစ်ပင်တွေရဲ့အဆီကနေ ထုတ်ယူထားတာ ဖြစ်ပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ ကျေးလက်ဒေသ အသီးသီးတို့မှာ ထွက်ရှိပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဆောင်ချက်ဟာ ကာဗွန် ဓာတ်ငွေ့ ထုတ်လွှင့်မှု လျော့ပါးစေရုံသာမက အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ ရေနံစိမ်း တင်သွင်းမှုအပေါ် မီခိုနေရမှုကိုလည်း သက်သာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ထူးခြားတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်မှာ ပါဝင်ခဲ့ကြသူအားလုံး၊ အထူးသဖြင့် လေယာဉ်တစီးကို ဇီဝ လောင်စာဆီနှင့် ပျံသန်းနိုင်အောင် နည်းပညာ တီထွင်ကြံဆခဲ့ကြတဲ့ CSIR သုတေသနဌာနနှင့် Dehradun မြို့မှ အိန္ဒိယ ရေနံစိမ်း ထုတ်လုပ်ရေးဌာနတို့မှ သိပ္ပံပညာရှင်တွေကို ချီးကျူး ဂုဏ်ပြုလိုပါတယ်။
ချစ်လှစွာသော နိုင်ငံသားအပေါင်းတို့… မိမိတို့ အိန္ဒိယနိုင်ငံတော်သစ်ရဲ့ မိခင်တွေနှင့် အမကြီး အမိရာဆိုသလို အမတော်တွေဟာ လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်း တခုလုံး အကျိုးပြု ပြောင်းလဲစေရေးအတွက် ဦးဆောင်လက်တွဲ ထွက်ပေါ်လာနေကြပြီး စိန်ခေါ်ချက်တွေကို အရှိန်အဟုန်နှင့် ဖြတ်ကျော်လာနေကြပါတယ်။ ဒါနှင့်ပတ်သက်လို့ Bihar ပြည်နယ်၊ Purnia ဒေသဟာ နိုင်ငံတဝှမ်းမှ ပြည်သူလူထုတွေကို လှုံ့ဆော်မှုပေးလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီဒေသဟာ ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ ရေလွှမ်းမိုးမှုတွေကြောင့် အကြီးအကျယ် ထိခိုက်ပျက်စီး နေခဲ့တဲ့ဒေသ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့် လယ်ယာလုပ်ကိုင်စားသောက်ဖို့နှင့် တခြားဝင်ငွေရင်းမြစ် ရှာဖွေဖို့ အင်မတန် ခက်ခဲမှုရှိခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလို အခက်အခဲတွေကြားမှာပဲ Purnia ဒေသမှ အမျိုးသမီးတချို့တို့ဟာ လမ်းကြောင်းထိုးဖောက်ဖို့ ရွေးချယ်လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ အရင်ကဆိုရင် Purnia ဒေသခံ အမျိုးသမီးတွေဟာ ပိုးစာပင်ကနေရရှိတဲ့ ပိုးကောင်ကနေ ပိုးချည်မျှင် ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြပြီး ၎င်းတို့ရဲ့ပိုးချည်ထုတ်ကုန်တွေအတွက် မဖြစ်စလောက် ဈေးနှုန်းဝင်ငွေမျှသာ ရရှိခဲ့ကြကာ အဲဒီ ပိုးချည်ကုန်ကြမ်းတွေ ဝယ်ယူခဲ့ကြတဲ့ ကုန်သည်တွေကပဲ ပိုးထည်တွေအဖြစ် ယက်လုပ်ရောင်းချကြတာကြောင့် ကုန်သည်တွေမှာ အမြတ်အစွန်း များစွာ ရရှိခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီကနေ့ခေတ်မှာတော့ Purnia ဒေသခံ အမျိုးသမီးတွေဟာ အခင်းအကျင်း အနေအထားတခုလုံး ပြောင်းလဲစေခဲ့တဲ့ အစပျိုးချက်တရပ်ကို ဆောင်ရွက်ထားကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအမျိုးသမီးတွေဟာ အစိုးရရဲ့အကူအညီနှင့် ပိုးစာပင် ထုတ်လုပ်ရေး သမဝါယမအဖွဲ့တွေ ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီနောက် သူတို့တွေဟာ ပိုးချည်အိမ်တွေကနေ ပိုးချည်မျှင်တွေ ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြပြီး အဲဒီချည်မျှင်တွေနှင့် စာရီ အဝတ်အထည်တွေ စတင်ယက်လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အရင်ကဆို အဲဒီ ပိုးချည်အိမ်တွေကို မဖြစ်စလောက် ဈေးနှုန်းနှင့် ရောင်းချခဲ့ရပြီး ဒီပိုးချည်အိမ်က ချည်မျှင်နှင့်ယက်လုပ်တဲ့ စာရီ အဝတ်အထည်တွေကျတော့ ရူပီးငွေ ထောင်ကျော်ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသိရရင် မိတ်ဆွေတို့ အံ့ဩကြမှာဖြစ်ပါတယ်။
ချစ်လှစွာသော နိုင်ငံသားပေါင်းတို့… ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံရဲ့ အမျိုးသမီးတွေနှင့် သမီးပျိုတွေ၊ ၎င်းတို့ရဲ့ စီးပွားလုပ်ဆောင်မှုနှင့် သူရသတ္တိတို့ဟာ ကျွန်ုပ်တို့တဦးစီတိုင်းအတွက် ဂုဏ်ယူဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိတို့ အမျိုးပျိုတွေ စံချိန်ချိုးခဲ့ကြတဲ့ ဥပမာသာဓက များစွာတို့အနက် အသက် ၁၂ နှစ် အရွယ်သာရှိသေးတဲ့ သမီးလေး Kamya Karthikeyan ရဲ့ ကြိုးပမ်းဖော်ဆောင်မှုကို မျှဝေဖော်ပြလိုပါတယ်။ အသက် ၁၂ နှစ်ပဲရှိသေးတဲ့ သမီးငယ်လေး Kamya ဟာ Aconcagua (အကွန်ကာဂွါ) တောင်ထိပ်အထိ တက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီတောင်ဟာ မီတာ ၇၀၀၀ လောက် အမြင့်ရှိပြီး တောင်အမေရိကတိုက်မှာ အမြင့်ဆုံး တောင်ထိပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလအစပိုင်းက သမီးငယ်လေး Kamya / တောင်ထိပ်ကိုရောက်ရှိပြီး ပထမဆုံးအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ သုံးရောင်ခြယ် အလံတော်ကို သမီးလေးလွှင့်ထူလိုက်တာဟာ အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတိုင်းရဲ့ ရင်ကို ဝမ်းသာပီတိတွေ ထိမိစေခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံ ဂုဏ်တက်စေလိုက်တဲ့ သမီးလေး Kamya ဟာ ယခုအခါမှာတော့ Saahas (စာဟာ) တောင်တက်ခရီး စတင်နေပြီး ဒီခရီးစဉ်အောက်မှာတော့ သမီးလေးဟာ ကမ္ဘာ့တိုက်ကြီးတွေမှာရှိတဲ့ အမြင့်ဆုံးတောင်ထိပ်တွေကို တက်ရောက်ဖို့ ကြိုးပမ်းနေတဲ့အပြင် ကမ္ဘာ့ တောင်ဝင်ရိုးစွန်းနှင့် မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းဒေသတို့မှာ နှင်းလျှောစီးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ Kamya ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ဟာ ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ဖို့ အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို လူတိုင်းအတွက် နှိုးဆော်မှုပြုလျှက်ရှိပါတယ်။ သမီးငယ်လေးရဲ့ Saahas တောင်တက်ခရီးအတွက် အကောင်းဆုံး ဆန္ဒမွန် ပြုလိုက်ပါတယ်။
လေးစားအပ်ပါသော မိတ်ဆွေများ ခင်ဗျာ…. ဘဝမှာ ဘေးဒုက္ခဆိုးကျိုး ကျရောက်တဲ့ အခြေအနေမျိုးတွေမှာ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ စွမ်းရည်သတ္တိနှင့် စိတ်ပိုင်းဖြတ်ချက်တို့ဟာ အခြေအနေကို လုံးဝ ပြောင်းလဲပစ်လိုက်စေရာမှာ အထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်။ တလောကတင်ပဲ သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ကျနော်ဖတ်ရှုခဲ့ရသူတဦးအကြောင်း သင်တို့နှင့် မျှဝေဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
အဲဒါကတော့ Moradabad ခရိုင်၊ Hamirpur ကျေးရွာမှာနေထိုင်တဲ့ ကို Salman ရဲ့ ဘဝဇတ်ကြောင်းလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Salman ဟာ မွေးရာပါ ကိုယ်အင်္ဂါ မသန်စွမ်းသူဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ သူ့ခြေထောက်ပေါ်မှာ မတ်တပ် မရပ်နိုင်ရှာပါဘူး။ ဒီလို အခက်အခဲတွေရှိပေမယ့် သူဟာ မျှော်လင့်ချက်တွေ မပျောက်ဆုံးစေခဲ့ဘဲ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း စတင်လုပ်ဆောင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအားဖြင့် သူဟာ တခြားသော ကိုယ်လက်အင်္ဂါ ချို့တဲ့သူတွေကို အကူအညီပေး လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်နည်းနည်းကြာလာတော့ Salman ဟာ သူတို့ကျေးရွာထဲမှာ ဖိနပ်နှင့် ဆပ်ပြာမှုန့် စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲ ကိုယ်အင်္ဂါ မသန်စွမ်းသူ အယောက် ၃၀ တို့က သူ့နှင့်အတူ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ Salman ဟာ သူကိုယ်တိုင်က လမ်းလျှောက်ဖို့ အခက်အခဲဖြစ်နေတာကြောင့် တခြားသူတွေ လွယ်လင့်တကူ လမ်းလျှောက်နိုင်ရေး အထောက်အကူပြုတဲ့ ဖိနပ်ထုတ်လုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာကိုလည်း သတိပြုမိကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့တွေ ကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်မှုကြောင့် သူတို့ကိုယ်တိုင်အတွက် အကိုင်အကိုင် ရရှိကြရုံမက သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းကို အကျိုးအမြတ်ရရှိစေဖို့အတွက်လည်း အသွင်ပြောင်းနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီနှစ်မှာတော့ Salman ဟာ သူ့လိုပဲ ကိုယ်အင်္ဂါ မသန်စွမ်းသူ ၁၀၀ ကျော်တို့အတွက် အလုပ်အကိုင် ဖြေရှင်းပေးနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ယခုဆိုရင်တော့ သူတို့တွေဟာ ဖိနပ် အရံ ၁၅၀ တို့ကို နေ့စဉ် ထုတ်လုပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ စွမ်းရည်နှင့် အလုပ်အကိုင်ကို ကျနော် အသိအမှတ်ပြု လေးစားအပ်ပါတယ်။
ချစ်လှစွာသော နိုင်ငံသား အပေါင်းတို့….ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံတဝှမ်းမှာ Maha Shivaratri ပွဲတော်ကြီးကို ကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။ ပွဲတော်အခါသမယမှာ နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားအားလုံး ကျန်းမာချမ်းသာလို့ ဘေးဘယာ ဝေးကွာနိုင်ကြပါစေ။ လာမယ့်နေ့ရက်တွေမှာ ကျွန်ုပ်တို့ဟာ ဟိုလီပွဲတော်ကို ကျင်းပသွားကြမှာဖြစ်ပြီး အဲဒီနောက် များမကြာမီမှာ Gudi Padva ပွဲတော်ကိုလည်း ကျင်းပသွားကြဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Ram Navami ပွဲတော်လည်း ရောက်လာဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပွဲတော်တိုင်း ပွဲတော်တိုင်းတို့ဟာ လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်းတွေကို စည်းနှောင်စပ်ယှက်စေရုံသာမက မိမိတို့တနိုင်ငံလုံး စိတ်ဓါတ်ညီညွတ်စေတဲ့ မမြင်နိုင်တဲ့ ဖွင့်ဆိုချက်တရပ်စီ ရှိနေကြပါတယ်။
ချစ်လှစွာသော နိုင်ငံသား အပေါင်းတို့…. လာမယ့် စိတ်နှလုံးမှ ပြောသောစကားများ ကဏ္ဍပိုင်းအထိ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဟာ စာမေးပွဲတွေနှင့် မအားမလပ် ဖြစ်နေကြမယ်ထင်မိပါတယ်။ စာမေးပွဲ ဖြေပြီးကြသူတွေမှာ အပူအပင် ကင်းရှင်းနေကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ စာမေးပွဲဖြေဖို့ ပြင်ဆင်နေသူတွေရော ဖြေပြီးသူတွေအတွက်ပါ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ဆန္ဒမွန် ပြုလိုက်ပါတယ်။ ဆွေးနွေးစရာ ခေါင်းစဉ်သစ်တွေနှင့်အတူ လာမယ့် စိတ်နှလုံးမှပြောသော စကားများကဏ္ဍမှာ ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့။